By **~ မြတ်ကြည်~** 3:04 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
ချွေးပေါက်ကျယ်တာကလည်း မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဒုက္ခတစ်မျိုးပဲ မဟုတ်ပါလား? မှန်ထဲကြည့်လိုက်ရင် သူများတွေလို ညက်ညက်လေး ဖြစ်ချင်ရတာ။ မြတ်ကြည်လည်း အပါအဝင်ပေါ့။
ချွေးပေါက်လေးတွေက ခန္ဒာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အညစ်အကြေး၊ ချွေးတို့ကို စွန့်ထုတ်ပေးသလို အသားအရေ စိုပြေလန်းဆန်းဖို့အတွက် အဆီကိုလည်း ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အသားအရေ ခြောက်တဲ့သူတွေဟာ စိုပြေတဲ့သူတွေ ထက် ပိုပြီး အိုမင်းရင့်ရော်လွယ်စေပါတယ်။ အဲဒီလိုကျတော့လည်း ကောင်းသား။
ချွေးပေါက်ကျယ်တာက မျိုးရိုးလိုက်တတ်သလို အရေပြားထဲမှာ အဆီ၊ ချေး၊ ဖုန် လေးတွေ ပိတ်မိနေတာက ချွေးပေါက်ကို ပိုပြီးကျယ်စေပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကျယ်တဲ့သူတွေဟာ သာမန်ထက်ပိုပြီး အဆီပြန်နိုင်၊ ဝက်ခြံပိုထွက် နိုင်ချေရှိပါတယ်။
1) မျက်နှာကို ညစဉ် မိမိအသားအရေနဲ့ ကိုက်မယ့် facial foam နဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ အရင်ဆုံးကို ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့သစ်ပေးပါ။ အဲဒါက ချွေးပေါက်ကို ခနကျယ်စေပြီး အဲဒီ ချွေးပေါက်ထဲမှာပါတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးမှ ရေအေးနဲ့ပြန်သစ်ပေးရင် သန့်စင်ပြီးသားချွေးပေါက်လေးတွေ ပြန်ပြီးကျဉ်းစေပါတယ်။
2) Toner သုံးပါ။ Toner သုံးတာက ချွေးပေါက်ဘေးက ကြွက်သားလေးတွေကို တင်းပေးတာကြောင့် ချွေးပေါက်ကို မသိသာစေတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အထဲမှာ ကပ်ငြိနေတာတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်လိမ်းမယ့် skincare ကို မျက်နှာမှ စုပ်ယူမှုပို အားကောင်းစေပါတယ်။
3) Oil free products များကို မှီဝဲပါ။ အဆီပါတဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေဟာ ချွေးပေါက်ကို ပိုပြီး ထင်ရှားစေပါတယ်။
4) ဗိုက်တာမင် စီ နဲ့ ဗိုက်တာမင် အေ ပါတဲ့ အစားအသောက်ကို စားပေးပါ။ Retin A လို့ ခေါ်တဲ့ Vitamin A လိမ်းဆေးက အဆီပြန်တာ လျှော့ချပေးသလို ဝက်ခြံကိုလည်း သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် စီ ကတော့ ချွေးပေါက် အရွယ် အစားကို ကျဉ်းပေးပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အချက်က မျက်နှာ နီပြီး အသားအရေ ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
5) နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပါ။ နေရောင်ကြောင့် အသားအရေပျက်စီးပြီး ချွေးပေါက်ကို ပိုကြီးစေနိုင်ပါတယ်။
6) Perricone MD Intensive Pore Minimizer L'Oreal Skin Genesis Pore Minimizing Skin အစရှိတဲ့ Pore minimizing product တွေကို လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
7) Facial Mask::: http://www.thanakharmay.com/2011/10/blog-post_26.html မှာတော့ အိမ်မှာပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းလေးရှိပါတယ်။ မနက်ဖြန် အပြင်သွားမယ်ဆို ဒီနေ့လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ချွေးပေါက်ကျယ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည့်စုံလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ :)
Facebook မှ မေးခွန်းမေးထားတဲ့ အစ်မ နဲ့ ညီမလေး လည်း အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
မဒမ်ကိုး July 22, 2012 at 6:41 PM
တိုနာသုံးဖို့ကိုသိပ်ပျင်းနေတာ တိုနီမိုလီဘီဘီခရင်ကိုဘဲ ကမန်းကတန်းလိမ်းပြီးအလုပ်ပြေးနေတာ မြတ်ကြည်လေးပြောမှဘဲ တိုနာသေချာပြန်သုံးဦးမှပါပဲ
Candy July 22, 2012 at 8:14 PM
ကန်ဒီက Combination oily ပဲ ပြောရမလား.. Combination normal ပဲ ပြောရမလဲ မသိဘူး.. နှာခေါင်းနဲ့ နဖူးကျ အဆီပြန်ပြီး ပါးတွေကျတော့ ခြောက်တယ် >.<
2010lady girl October 10, 2016 at 6:53 PM
ချွေးပေါက် ကျယ် အဆီ လည်း ပြန် 😣😣😣
Myat Kyi Thein October 11, 2016 at 7:05 AM